သကျတနျ့ခြို: ဗီတာမင် B1 ချို့တဲ့မှုကြောင့်ဖြစ်သော သူငယ်နာရောဂါ (Beri Beri)
Vitamin B1 50mg ကို တစ်နေ. တစ်လုံးနဲ. ဘယ်လောက်ကြာကြာသောက်နိုင်ပါသလဲ။ ဆက်သောက်ဖို.လိုမလို ဆရာဝန်နဲ.ပြန်ပြပါမှ သိနိုင်မှာလား။
Unknown September 4, 2018 at 4:37 PM
ကျွန်တော် လက်တွေထုံကျင်နေလို့ ဆေးခန်းပြပါတယ်b1ချို့တဲ့တာလို့ပြောပါတယ် b1 အာဆေးပေးပါတယ် ကြာကြာစွဲသောက်ရင်ပြောသွားမှာပါလားခင်ဗျာ